China BaGa4Se7 Amakristali Umvelisi kunye noMthengisi | Ukutya
iqela lesithuba: IPc
Uluhlu lokuhambisa: 0.47-18μm
Umlinganiso omkhulu we-NLO: d11 = 24 emva kwemini / V
Ubungqina bendalo @ 2μm: 0.07
Umqobo womonakalo (1μm, 5ns): 550MW / cm2
Amakristali akumgangatho ophezulu we-BGSe (BaGa4Se7) yi-selenide analogue ye-chalcogenide compound BaGa4S7, ene-acentric orthorhombic structure eyachongwa ngo-1983 kunye nefuthe le-IR NLO elixeliweyo ngo-2009, yikristale entsha ye-IR NLO. Yayifunyanwa nge-Bridgman – Stockbarger. Le kristale ibonisa ukuhanjiswa okuphezulu kuluhlu olubanzi lwe-0.47-18 μm, ngaphandle kwencopho yokufunxa ejikeleze i-15 μm.
I-FWHM ye (002) incopho yokugungqa i-curve imalunga ne-0.008 ° kwaye ukuhanjiswa ngepleyiti eyi-2 mm eshinyeneyo (001) ijikeleze i-65% kuluhlu olubanzi lwe-1-14 μm. Iipropathi ezahlukeneyo ze-thermophysical zalinganiswa ngekristali.
Ukuziphatha kwokwanda kwe-thermal kwi-BaGa4Se7 akubonakalisi i-anisotropy eyomeleleyo nge-αa = 9.24 × 10−6 K-1, αb = 10.76 × 10−6 K-1, kunye ne-ac = 11.70 × 10−6 K-1 ecaleni kwee-axis ezintathu ze-crystallographic . Umahluko wobushushu / we-thermal conductivity coefficients olinganiswe kwi-298 K zi-0.50 (2) mm2 s − 1 / 0.74 (3) W m-1 K-1, 0.42 (3) mm2 s − 1 / 0.64 (4) W m-1 K, 1, 0.38 (2) mm2 s − 1 / 0.56 (4) W m-1 K-1, ecaleni kwe a, b, c i-crystallographic axis ngokwahlukeneyo.
Ukongeza, umda womonakalo womphezulu we-laser walinganiswa ukuba ube yi-557 MW / cm2 kusetyenziswa i-Nd: YAG (1.064 μm) laser phantsi kweemeko ze-5 ns ububanzi be-pulse, i-1 Hz frequency, kunye ne-D = 0.4 mm ubungakanani bendawo.
I-BGSe (BaGa4Se7) ikristale ibonisa impendulo yomgubo wesibini we-harmonic (SHG) omalunga nama-2-3 amaxesha e-AgGaS2. Umda womonakalo womphezulu we-laser umalunga nama-3.7 amaxesha e-AgGaS2 yikristale phantsi kweemeko ezifanayo.
I-BGSe yikristale inokuthambeka okukhulu kokungahambelani nomgaqo, kwaye inokuba nethemba elibanzi lokusebenzisa ngokusebenzayo kumbindi we-IR. Ibonisa umdla we-terahertz phonon-polaritons kunye ne-coefficients ephezulu engahambelaniyo nesizukulwana.
Izinto eziluncedo ze IR laser imveliso:
Ilungele imithombo yokumpompa eyahlukeneyo (1-3μm)
Uluhlu olubanzi lokulungiswa kwe-IR (3-18μm)
I-OPA, i-OPO, i-DFG, i-intracavity / i-extravity, i-cw / ukubetha kwempompo
Isaziso esibalulekileyo: Kuba le ikristale yohlobo olutsha, ngaphakathi ikristale inokuba nemigca embalwa, kodwa asiyamkeli imbuyekezo ngenxa yesi siphene.
iqela lesithuba IPc
Uluhlu lokuhambisa 0.47-18μm
Umlinganiso omkhulu we-NLO d11 = 24 emva kwemini / V
Ukuntywila kwindyebo @ 2μm 0.07
Umqobo womonakalo (1μm, 5ns) 550MW / cm2